Bogga 5 aad by wargeyska313 - Issuu
FAALLO IYO FALANQEYN
In dhawaalaba shacabka Soomaaliyeed wuxuu tabanayay hoggaamiye dhab ah oo wax badan ka qabta danahooda, Madaxweyne ku dhaqaya xaqa, waxaana caado iska ahayd in madaxtinimada dalka loo soo maro waddada xildhibannada, balse waxaan kaa sugeynaa in aad gaarsiiso dalka waddada hal cod iyo hal qof. Sidaa darteed, mudane Madaxweyne, Dadaal ama ha dadaalin Dadkani waa Dadkaad ogeyd, shacabkuna way dulman yihiin, waxay mar waliba ka cowdaan dhibaatooyin kaga yimaada maamullada hoose ee xilalka u haya, kuwaasoo ku eedeysan mar walba inay habsami u socodka howlaha dowladda u beddelaan nidaam qabyaaladeed, runtiina waa sidaas. Mudane Madaxweyne, waxaad shacabka Soomaaliyeed u ballan qaaday in aad wax ka qabaneyso nidaamka caddaaladda ee hadda jira, hase yeeshee weli halkeedii ayey taagan tahay, Dadkuna way ilmeenayaan caddaalad darrada owgeed ee ka jirta meelaha loo doonto caddaaladda. Shaki la’aan waad dadaashay Madaxweyne, adiga iyo xakuumaddaaduba, waana ku amaanayaa sida aad ugu guuleysateen horumarka muddadii aad xilka heyseen, laakiin waxaa weli taagan Caddaaladda Dalka iyo Ballan qaadkii dhinaca amniga oo weli ah fari kama qodna faanoole. Dhinaca kale, Mudane Madaxweyne, waxaad dhalisay goolkii ugu fiicnaa markii aad isu keentay walaalihii is diidana ee gobollada dhexe Soomaaliya, taasoo dib u hishiisiintii soo jiitameysay sannooyinka badan aad ku soo afjartay muddo gaaban, waana waxaan weli ka dhicin dalka Soomaaliya waana guul Taariikhi ah. Mudane Madaxweyne, waxaad ummadda Soomaaliyeed u xaqiijisay muddadii sannadka ahayd, horumar la taaban karo, haddii la eegay dhinacyada kala duwan ee hannaanka dowladnimo iyo in la gaari karo wax walba oo wanaagsan. Mudane Madaxweyne, waxaa loo baahan yahay in kormeerrada madaxda ay ku tegayaan Hay,adaha ama goobaha Caddaaladda, waa in kormeerkoodu ugu kuur-galaan hoosna ugu daadegaan waxa ka jira xarumahaas, kormeerkuna uu noqdaa mid dhab ah, laguna dhageystaa cabashooyinka dadka la kormeerayo ay qabaan. Mudane Madaxweyne, adiga iyo xakuumaddaadu waxaad muujiseen dhabar adayg, waxaana ka gudubteen jallaafooyin fara badan oo ay idiin dhigeen cadowga Soomaaliyeed iyo inta ay ku adeegtaan, shacabkuna waxay ogaadeen in aysan maanta ahayn agoon, waayo waxay ogaadeen inaysan cidlo ahayn, waxayna aamineen in ay helleen dowlad iyo xukuumad isku duuban oo u istaagay danahooda. Waxaan ku talinayaa intii karaan kiinna ah in lala dagaalo qabyaaladda iyo kuwa dabada ka riixaya, sidii loola dagaalay kuwa musuq-maasuqa ku adeegan jiray, taasoo la arkay mira dhalkeeda, waayo Md: Madaxweyne Qaran iyo qabyaalad meel ma wada galaan. Xagga amniga waxaan ka leeyahay, weli waa liitaa dhinaca amniga, halka ay sarta ka qurunsan tahayna weli waa la garan la’yahay Sidaa daraaddeed, waa in Ciidammada faraha badan ee dowladda ay si dhab ah u shaqeeyaan, waayo waxaan caqliga geleynin in habeen iyo maalin magaalada Muqdisho lagu dilo dad shacab ah, iyadoo ay dhex joogaan kumanaan Ciidamo kala duwan ah, halkaas waxaa ka muuqda in aan weli si dhab ah loo gudaneynin waajibaadkii ka saarnaa dadka ay sugayaan amaankooda. Waxaan rajeynayaa in si joogto ah xaafadaha lagu daadsho Ciidamada habeenkii iyo maalintiiba, waa in ciidammadu ku dhax baryaan xaafadaha dhexdooda waardiye culusna ka qabtaan si ay shacabku u dareemaan in ciidammadooda ilaalinayaan nabadgelyadooda, maahin in amaanku yahay in la joogsado waddooyinka laamiyada ah, cadowgu ma joogo laamiyada ee xaafadaha ayay dhex hurdaan, waa in la shaqeeyo oo si dhab ah loo badbaadiyo shacabka lagu dilayo guryahooda dhaxdiisa, masaajidyada, dariiqyada iyo meelkasta, arrintaasi waa in aad si fiican u fiirisaa una dhaba gashaa halka ay wax iska qaban la’yihiin, Madaxweyne sidaan suuragal ma ahan. Waxaan ku soo gabagabeynayaa, waad gaarteen guushii, halkaasna ka sii wada howsha Qaran ee aad Ummadda Soomaaliyeed u heysaan adiga iyo Xakuumadda Nabad iyo Nolol, Taasina Waa Guul iyo Gobannimo. Ciise Faarax.
Cabdirisaaq Axmed Absuge 28 sano ka dib uma malaynayo in weli xiiso loo qabo, dagaalo ka dhex dhaca qabaa’ilka Soomaalida, sababtoo ah waa la arkay in dagaal uusan ahayn wax wanaagsan oo loo haleelo. Dagaal waa dhimasho, waa dhaawac aan bogsoon, waa is nacayb, waa hanti bur bur, waa qax, waa kala maadasho, iyo cabsi, waa raaxo la’aan iyo gaajo. Haddaba iyada oo intaasi la wada ogyahay in dagaaalku ku hoos duugan tahay ayaad waxaad arkaysaa qaar dadka Soomaaliyeed ka mid ah oo abaabulaya balaayaadaas aan ku haboonayn sii jirista nolosha bani’aadamka. Waxaad arkaysaa rag waawayn oo magac iyo maamuus ku leh bulshada, oo si bareer ah uga leh Idaacadaha Maxaliga ah wax aan ku wanaagsanayn sheegistooda Shareecada islaamka, una banaanayn in uu ku dhawaaqo qof ashahaata oo dan ka leh aayihiisa dambe iyo Aakhiradiisa, isla markaana og in aan dunidaan lagu waaraynin. Waxaan la yaabay dad dukanaya oo markii ay masaajidada ka soo baxaan isu sheegaya dagaal meel ka dhacay oo ay ku geeriyoodeen, ku dhaawacmeen, kuna barakaceen dad Soomaaliyeed oo wada Muslimiin ah oo u riyaaqaya kuna wiirsanaya jabka iyo halaagga ay isu gaysteen kuwii shaydaanka duufsaday ee is dilayey ujeeddo la’aanta oo dhahaya iyaga oo weesadii ay ku soo tukadeen qaba way ku haboon yihiin reer hebel ama beel hebla in sidaas wax loo gaarsiiyo, maadaama beesheena laga kari waayay. Bal ogoow kuwa sidaas u hadlaya in aysan ka jaahil ahayn xagga Rabbi in dunuubta ugu waawayn uu ka mid yahay
Isniin 12 February 2018 11
Dagaalladu waa wax wasaq ah waana shaqo rageed!!!
nafta insaanka oo kas loo gooyo, kumana sii jirto haddii naftaasi ay tahay mid Ashahaadata. Dadka caynkaas oo kale u dhaqmaya malagu sheegi karaa Muslim,waxaan shaki ku jirin in dadkaasi aysan weli fahmin waxa ay Diinta islaamka tahay,kaliya ay moodayaan in la ashahaato madaxana dhulka la dhigo 5 jeer maalintii wax kalana aan looga baahnayn ruuxa Muslimka ah, taasna waa garasha la’aanta haysta in badan oo dadka Soomaaliyeed ah. Dhibka jirana wuxuu yahay qaadsho la’aanta dadka qaarkiis wixii ay Diinta diidan tahay mar haddii ay ka hor imaanayso danaha qabiilka, iyo danahooda gaarka ah, taana qofka aaminsan lama dhihi karo waa qof Muslim ah oo saafi ah. Markii aad la sheekaysto Soomaalida da’doodu ka wayn tahay 30ka sano waxa uu kuu sheegi karaa cawaaqib xumida laga dhaxlo dagaalada gaar ahaan kuwa Ahliga ah, wuxuu kuu sheegayaa isaga oo tiiraanyeysan in laga fiicaan yahay isdilka iyo is mooraduugga ay qaar ka mid ah qabaa’ilka soomaliyeed isku hayaan xiligaan, wuxuu kuu sheegayaa in Soomaalidu ku soo daashay islayn gudaheeda ah, Dagaalkuna uu yahay wax aan rayn oo laga raystay, laguna soo jiray waqtiyadii la soo dhaafay. Shaki malahan in intaas uu kuu sheegayo ruuxa Soomaaliyeed ay wada sax tahay, hadana haddii uu maanta dagaal dhaco uuna dagaalkaas dhex maro beesha uu dhalasho ahaan ka soo jeedo iyo mid kale, kama sugaysid qofka Soomaaliga ah in uu ka joogo dagaaalkaas uu dhibkiisa kaaga sheekaynayey goortii dhawayd,wuuba
iloobayaa dhibka dagaalada lagala kulmo ee uu ka waramayey, wuxuuna u haliilayaa in uu si degdeg ah ku tago goobta dagaalka ka socdo, xitaa haddii ay u jirto kumanaan kun oo KM. Dad baa yiraahda dagaalka waa mid ka mid ah sunooyinka Rabbi ee uu ku jideeyey adoomihiisa Aadanaha, waan run in dagaalka uu yahay wax aadanaha rabigooda uu ku jideeyey, laakiin dagalaka Soomaalida isku hayso ma yahay dagaal ilaahay raali ka yahay? Inta aan ka jawaabin su’aashaas waa maxay dagaal? meeqa dagaal ayaana jirta?. Dagaal waa is dil is barakicin is moora duug iyo dhiig daadin iyo dhaawaac, waxaa jira laba dagaal Dagaal xaq ah iyo dagaal xaqdarro ah, dagaalka xaqqa ah waa midka kor loogu qaadayo Diinta islaamka, waxaana loo yaqaan JAHAAD, wuxuuna dagaalkaasi dhex maraa rag diidan Ilaaheey iyo shareecadiisa, iyo rag kaloo doonaya in ay kor noqoto kalimadda qiimaha badan ee tawxiidka. Waxaa kaloo jira dagaal dhex mara laba qolo oo aan islaam ahayn waxaana loo yaqaanaa DAGAAL, sidoo kale waxaa jira dagaal dhex mara laba qolo oo islaam ah kaasna waxaa la yiraahdaa FIDNO. Haddaba dagaalka Soomaalida dhexdooda ka socda waa mid fidno ah waxaana waajibku yahay in laga dhawrsado oo aan laga qayb galin si kasta, midda kale waa wax Soomaalidu ka raysatay oo aan rayn. Waana in gebi ahaan la joojiyaa dagaalada geyiga Soomaaliyeed ka socda oo dhan, isla markaana laga hortagaa cid kasta oo abaabulaysa mid cusub oo hor leh. W/Q: Cabdirisaaq Axmed Absuge
TELEFISHINKA QARANKADHAQANKA SOOMAALIYA WASAARADDA WARFAAFINTA IYO DALXIISKA WARARKA DOWLADDA WAXAAD KA HELI KARTAA: Main web: www.moi.gov.so www.sonna.so www.radiomuqdisho.net www.dalka.so www.sntv.so
https://www.facebook.com/sntvnews/ https://www.facebook.com/dalkajournal https://www.facebook.com/sonnalive https://www.facebook.com/RadioMogadishu/ https://www.facebook.com/moisomalia/
Email: Info@dalka.gov.so Tell: 25261562132/ 252615193738
Bogga 5 aad